Baaritaanka xaalad-caafimaadeedka uurjiifka. [Foster diagnostik] Skåne – af-iswidish fudud - 1177
Fosterdiagnostik i Skåne - somaliska
Baaritaanka xaalad-caafimaadeedka uurjiifka. [Foster diagnostik] Skåne – af-iswidish fudud
Fosterdiagnostik i Skåne - somaliskaThe content concerns Skåne
Uur miyaad leedahay? Haddii aad uur leedahay waxaad helaysaa fursadda lagu doorto baaritaanka loo yaqaanno baaritaanka xaalad-caafimaadeedka uurjiifka, oo macneheeda ah shaacbixinta baaritaanka xaalad-caafimaadeedka uurjiifka. Baaritaanka xaalad-caafimaadeedka uurjiifka wuxuu ka kooban yahay baaritaanno kala duwan, oo lagu baaro xaaladda uu uurjiifka kaga sugan yahay caloosha. Waxaa baaritaanka lagu shaacbixin karaaa haddii uurjiifka uu cudur qabo, dhawaacyadaha uurjiifka ama kala duwanaanshada koromsoomada.
Qofka adigoo kale oo uurka leh, ayaa go`aanka baaritaanka iska leh – waxaad go`aansan kartaa inaad ka faa`iidaysato baaritaanka iyo in kale. Ma doonaysaa in baaritaanka loo yaqaanno ultra sound lagugu bilaabo biloowga uurqaadida, koow iyo tobbanaad ilaa toddobaadka afar iyo tobbanaad? Xaaladaas toos ula xiriir rugta ummulisada/hooyooyinka markii aad ogaato inaad uur leedahay.
Haddii fursadda baaritaanka noocaan ah lagu soo bandhigo, uma baahnid inaad wax kharash/lacag bixiso.
Maxay tahay sababta aan uu doonaayo in lay baaro?
Haddii iyadoo la adeegsanayo baaritaanka noocaan ah lagugu sameeyo, waxaad heli doontaa warbixin dheeraad oo ku saabsan xaalad-caafimaadeedka uurjiifka. Badi ahaan natiijada waxay noqota in wax kasta ay hagaagsan yihiin. Laakinse mararka qaarkood waxaa la shaacbixiya in uurjiirka uu jirro qabo, dhawaac ama kala duwanaanshada koromsoomada. Kala duwanaanshada koromsoomada waa isbedel ku dhacay koodka hidaha ee uurjiifka, dna. Kala duwanaanshada koromsoomada wuxuu mararka qaarkood saamayn ku yeesha qaabka xubnaha uurjiifka uu horumar u sameeyo una shaqeeyo. Sida tusaale badi ahaan waxay saamayn ku yeeshaan hab shaqaynta maskaxda.
Kala duwanaanshada koromsoomada qaarkood waxay noqon karaan kuwa halis ah, halka kuwa kalena aan ba la garanayn jiritaankooda. Sidaas awgeed, haddii la adeegsado baaritaanka xaalad-caafimaadeedka uurjiifka, waxaad heleysa fursad aad ku ogaato haddii uurjiifka u qabo kala duwanaanshada koromsoomada iyo in kale, iyo nooca uu yahay.
Kala duwanaanshada koromsoomada waxay caadi ahaan sababaan cudurka [Downs syndrom].
Baaritaanka xaalad-caafimaadeedka uurjiifka wax kasta laguma shaacbixin karo
Baaritaanka xaalad-caafimaadeedka uurjiifka wax kasta laguma shaacbixin karo sida cudurrada dhammaantood, dhawaacyada uurjiifka ama kala duwanaanshada koromsoomada. Mararka qaarkood waxay soo ifbaxaan xilliyada uurqaadida ugu dambeeyaan, kaddib markii u cunugga dhasho ama goor dambe noolashiisa.
Adiga ama qof aad qaraabo tihiin ma qaba cudurrada layska dhaxlo ama kala duwanaanshada koromsoomada? Xaaladaas waa inaad wargelisaa ummulisada ama dhakhtar ku qaabilsan.
Baaritaanka sidatan ayaa loogu dhaqaaqa
Haddii aad doonayso in lagu baaro waxaad toos ula xiriirta rugta ummulisooyinka/hooyooyinka. Waxaad baaritaanada lagu siyay fursadda inaad sameeyso ka dooran kartaa kuwa ku anfacayo.
Ereyada masawirka: Iyadoo la adeegsanayo aaladda ultra sound ayaa caloosha laga baarayaa.
Baaritaanka ultrasound ku salaysan
Markii aad uur leedahay laba jeer ayaa ultrasound lagugu baari karaa. Baaritaanka ugu horeeyo waxaa lagugu samayn doonaa inta u dhaxaysa toddobaadka koow iyo tobbanaad ilaa toddobaadka afar iyo tobbonaad, kan ku xiga wuxuu ku beegan yahay toddobaaka uurka sideed iyo tobbonaad ilaa labaatanaad. Maadaama marka labaad ee baaritaanka la sameeynayo uu uurjiifka ka wayn yahay goortii hore, hab fudud ayaa lagu saacbixin karaa cudurrada qaarkood, dhawaacyada uurjiifka qaarkood iyo kala duwanaanshada koromsoomada qaarkood.
Sidatan ayaa baaritaanka loogu dhaqaaqa:
Waxaa laga baari doonaa dusha caloosha waxaana shaashada kaaga muuqan doono masawirro dhaqdhaqaaqa ee uurjiifka.
Markii baaritaanka ugu horeeyo lagugu sameeynayo waxay ummulisada ama dhakhtar kaaga sheekayn doonaa, tan iyo goorta aad uurka qaaday iyo goorta aad ummuli doonto. Markii baaritaanka labaad la sameeynayo waxaa lagu wargelin doonaa heerka uu uurjiifka koray.
Waxaa kaloo lagu wargelin doonaa tirada uurjiifyada ee aad ilmogalenka ku sido.
Ummulisada ama dhakhtarka wuxuu baarayaa haddii uurjiifka uu cudur qabo, dhaawac ama kala duwanaanshada koromsoomada.
Ummulisada ama dhakhtarka wuxuu baarayaa halka maandheerta ay ilmogaleenka kaga jirto.
Baaritaanka ku salaysan aaladda ultra sound iyo shaybaarka dhiigga (KUB)
Baaritaan loo yaqaanno [KUB] wuxuu ku salaysan yahay baaritaanka ultra sound iyo shaybaarka dhiigga kuwaasoo lagu dhaqaaqi doono laga bilaabo toddobaaka uur-qaadida koow iyo tobbanaad ilaa toddobaadka afar iyo tobbanaad. Baaritaanada noocaan ah waxaa badi ahaan lagu shaacbixiyaa kala duwanaanshada koromsoomada ugu caadiyeeysan. Sida tusaale kuwa sababa cudurka [Downs syndrom].
Ugu badnaantii hal toddobaad kahor baaritaanka ultra sound, waxaa laga qaadi doonaa shaybaarka dhiigga. Markii ummulisada ay kugu samaynayso baaritaanka ultra sound waxay cabbiraysa dheecaanka qoorta uurjiifka. Kaddib waxaa lagu wargelin doonaa heerka halista kala duwanaanshada koromsoomada ee uurjiifka. Heerka halista waa hadba waxa uu shaybaarka dhiigga muujiyo, heerka dheecaanka ku jira qoorta uurjiifka, miisaankaaga iyo da`daada.
Dhacdoonada baaritaanka KUB kaddib:
Badi ahaan kala duwanaanshada koromsoomada si sahal looma helo waxayna dhammaan natiijada noqota caadi. Xaaladaas looma baahna inaad baaritaan dheeraad samayso.
Haddiise laga shakisan yahay jiritaanka kala duwanaanshada koromsoomada uurjiifka, xaaladaas waxaa laga qaadi doonaa shaybaarka dhiigga. Shaybaarka dhiigga noocaas ah waxaa loo yaqaanno [NIPT].
Haddiise aad looga shakisan yahay jiritaanka kala duwanaanshada koromsoomada, waxaa shaybaar laga qaadi doonaa dheecaanka uurjiifka.
Baaritaanka shaybaarka dhiigga (NIPT)
NIPT waa shaybaarka dhiigga oo laga qaado qofka adigoo kale ah oo uur qabo. Waxaa dhici karto in shaybaarka dhiigga noocan ah lagu shaacbixiyo jiritaanka kala duwanaanshada koromsoomada ee ugu caadiyeeysan. Sida tusaale, kuwa sababa cudurka loo yaqaanno [Downs syndrom].
Shaybaarka noocaan ah waxaad samayn kartaa kaddib markii aad samayso shaybaarka loo yaqaanno KUB. Goortaas waxaad ku sugan tahay toddobaadka uurka laba iyo tobbonaad ilaa toddbaadka uurka afar iyo tobbonaad. Natiijada shaybaarka loo yaqaanno NIPT way ka saxsan tahay natiijada baaritaanka loo yaqaanno KUB. Haddiise aad mataano sido lagu ma oggola inaad samaayso shaybaarka noocaan ah.
Qof ummuliso ama kalkaaliso hoose ah, ayaa shaybaarka dhiigga ka qaado cuduuda, kaddib waxaa loo dira goob shaybaarrada lagu falanqeeyo. Hal ilaa laba toddobaad kaddib ayaa natiijada baaritaanka lagu wargelinayaa. Waxaa dhici karto in shaybaar dheeraad laga qaado dheecaanka uurjiifka ama mandheerta, waa haddii aad looga shakisan yahay jiritaanka kala duwanaanshada koromsoomada.
Haddii la shaacbixiyo in uurjiifka u qabo cudur, dhaawac ama kala duwanaanshada koromsoomada maxaa dhici doono?
Haddii la shaacbixiyo in uurjiifka u qabo cudur, dhaawac ama kala duwanaanshada koromsoomada waxaad la kulmi doontaa qof dhakhtar ah. Mararka qaarkood dhakhtarku ma garanaayo haddii kala duwanaanshada koromosoomada ay halis yihiin ama in kale. Xaaladaas wuxuu dhakhtarku u baahan yahay in uu sameeyo baaritaan dheeraad.
Haddii la shaacbixiyo in uurjiifka u qabo cudur, dhaawac ama kala duwanaanshada koromsoomada ma ahan xaalad wanaagsan. Xaaladaas waxaa fiican in qofku u haysto qof uu kala xaajodo dhibaatada jirta. Sida qof ah la taliyeha arrimaha bulshada, aqoonyahanka cilminafsiga/saykoolojist ama qof dhakhtar ah. Waxaa kaloo lagu wargelin doonaa haddii uurjiifka uu qabo cudur, dhaawac ama kala duwanaanshada koromsoomada.
Dadyoowga qaarkood waxay go`aansadaan in aynan joojin uurqaadida, halka kuwa kalena ay joojiyaan uurqaadida. Lama oran karo go`aankaan ayaa sax ah kan kalena waa khalad. Qofka uurka leh ayaa had iyo jeer iskaleh awoodda go`aan gaarida. Ilaa toddobaadka sideed iyo tobbonaad ee uurqaadida ayuu surtagal yahay joojinta uurqaadida. Markaas kaddib waxaa hirgeli doono nidaamyo gaar ah.